विचरा बृद्ध आमा–बुबा ! | eAdarsha.com
विचरा बृद्ध आमा–बुबा !
आखिरमा किन मान्छे बृद्ध बाबु आमा प्रति अमानवीय र अमर्यादित हुन्छ ? किन हिजोका दिनमा बाबु आमाले प्रकट गरेको आत्मीयता, जिम्मेवारी र संवेदनात्मक भावना विर्सन्छ ? जुन सन्दर्भ आजको जनमानसमा अपूरणीय रिक्तता बनेको छ ।
भो नाम नलिऊँ । नातागोता के पर्ने हुन, त्यो पनि ओझेलमा राखौँ । मात्र प्रसङ्ग खोलौँ, एक जना बूढी आमा हाम्रो घर आइन । र भनिन् ‘विरामी छु बाबु ! पेट कट्कटी खान्छ । भित्र–भित्र सुईले घोचे जसरी घोच्छ । केही खान पटक्क मन लाग्दैन । त्यसरी खान नरुचेको पनि दुई हप्ता जति भो । खान नरुचे पछि त निन्द्रा पनि लाग्दो रहेनछ । के गर्नु बाबु आफुले माया मानेर रत्तिएन । आज त्यही छोराले माया मार्दा, वेवास्ता गर्दा बाच्ने कत्ति मन छैन । भन्ने बित्तिकै काल पनि आउँदो रहेनछ ।’
उहाँको कुरा सुन्दा अचम्म लाग्यो । उनको छोरा समाजसेवी र प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थिए । यस मानेमा मैले आश्चर्य भावमा भने, ‘के नपत्याउने कुरा गर्नु भएको तपाईले । उहाँ दाइ त त्यस्तो नहुनु पर्ने । त्यतिविधि अन्याय नगर्नु पर्ने । गाउँसमाजमा त्यत्रो इज्जत भएको मान्छे । उहाँले नै त्यस्तो गर्नु भयो भने कस्का बाबु आमाले सेवा र सुख पाउलान त नि ।’
‘त्यो त उसको देखाउने दाँत हो बाबु ! घरमा कति असजिलो र कति विरसिलो छ भन्ने कुरा मलाई मात्र थाहा छ । हुन त आफ्नो छोराको कुरा गरेर आङको छारो के उडाउनु ।’ बूढि आमा निराश हुदै भनिन् ।
साथै आफुले छोराका निम्ति काटेका कहर र दुःख बताइन । जीवनमा भोगेका गोता र हण्डर पोखिन । अनि अहिले बुढेसकालमा कसैले नपाएको ठक्कर र नभोगेको सास्ती आफुले भोग्नु परेको कुरा कसैलाई नभन्ने शर्तमा भनिन्, ‘बाबु मलाई साह्रै भयो डाक्टरलाई देखाउन पाए अलि विशेक हुन्थ्यो कि । खान पनि रुच्थ्यो कि भन्दा छोराले त के भन्छ भने, बूढेसकालमा केही न केही रोग लागिहाल्छ । एक पटक मरेर जाने शरीर हो । उपचार गरे पनि, नगरे पनि मर्ने निश्चित छ । केलाई गर्नु पैसा खर्च ? पचहत्तर वर्षकी पुग्यौ, अझै कति वर्ष बाँच्छु भन्ने छ बूढी तिम्लाई पो भन्छ ।’
उनका कुराले मलाई हदैसम्म दङ्गचित तुल्यायो । किञ्चित अनपत्यारिलो पारामा मनन गरेँ । एकाध घटना सँग दाँजे । सोचेँ, मान्छे यतिसम्म अधर्मी हुन सक्दा रहेछन् । यतिसम्म कृतघ्न र निष्ठूर हुन सक्दा रहेछन् । मनमा अफशोचको लहर निरन्तर चलिरहयो । लाग्यो, जीवन थिग्ग्रिने भने कै बूढेसकालमा होइन र ? कोही कोही भाग्यमानी मात्र दिन उमेरमा नै (अल्पायुमा) विदावादि हुन्छन् । नत्र भने बूढेसकाल भोग्नु प्राकृतिक नियम हो । आज बुवा आमा एवं बूढाबूढीलाई जति वेवास्ता गर्छन् । जति चिमोट्छन् र पीडा दिन्छन् । आखिर तिनले पनि बूढेसकाल भोग्नु पर्छ ।
यदि तिनले बाबुआमा माथि गरेको व्यहोरा एउटा संस्कारमा परिणत भयो भने भोलि तिनको अवस्था के हुन्छ ? भन्नाले तिनका छोरा छोरीले पनि आफ्ना अभिभावकको कर्तुत पढेका छन् । जुन कर्तुत आफ्ना सन्ततिले भोलिको दिनमा आत्मसात र अवलम्वन गरे भने । हजुरवा हजुरआमालाई आफ्ना बाबु–आमाले गरे जसरी आफुले पनि गरे भने, न त सेवाभावको औचित्य रहन्छ । न त सदव्यवहार र सदाचारले स्थान पाउँछ । आखिरमा किन मान्छे बृद्ध बाबु आमा प्रति अमानवीय र अमर्यादित हुन्छ ? किन हिजोका दिनमा बाबु आमाले प्रकट गरेको आत्मीयता, जिम्मेवारी र संवेदनात्मक भावना विर्सन्छ ? जुन सन्दर्भ आजको जनमानसमा अपूरणीय रिक्तता बनेको छ । आजको समाजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।
यद्यपि मान्छे सर्वगुण सम्पन्न हुदैन । कमी कमजोरी हरेक मानवको विशेषता हो । कमी कमजोरी नभएको मान्छे सायद हुदैन । अर्थात कमी कमजोरी विहीनता भगवानमा मात्र संभव छ । तर पनि भगवान एउटा आदर्शवान पात्रमा सीमित छन् । तर पनि मान्छेले आफुले निर्माण गरेका आदर्श, मूल्य र मान्यता भुल्नु स्वयं आफ्नै जीवनीका लागि हानिकारक हुन सक्छ । अझ पूर्वीय दर्शनमा आधारित हामी बाबु–आमालाई साक्षात् भगवान मान्छौँ । आफु यस धरतीमा उम्रिए देखि हौसियत निर्माण गरुञ्जेलको श्रेय बाबु आमा लाई दिन्छौँ । आफ्नो आचरणको विकासको जस पनि तिनै बाबु–आमालाई दिन्छौ । यथार्थमा जे जति छाँै । जे जति हुनुमा गर्व गर्छाै । त्यसको सम्पूर्णता बाबु आमालाई ठान्छौ । जुन सत्य वास्तविक व्यवहारमा सर्वसुलभ हुन सकेको छैन । सबैको मानसपटल भित्र प्रवेश गर्न सकेको छैन । त्यसैले हरेक मान्छेले आफ्नो बाल्यकाल र विगत सहजै विर्सिदिन्छन् । बाबु–आमाप्रति उदासीन र अनुदार बन्दछन् ।
यसो त बुढेसकाल आफैमा असन्तुष्टिमय समय हो । आफैमा उराठलाग्दो समय पनि हो । वैराग्यले हतोत्साहित तुल्याउने क्षण हो । सत्य यो पनि हो, यो समयमा आफन्तजनको माया र सेवाको आशा हुन्छ । मीठो मसिनो र तातो चिसो मिलाएर खान खोज्ने एक प्रकारको प्रलोभन हुन्छ । त्यस्ता भावनाहरुलाई अक्षरश ः छोराछोरी र बुहारीले बुझ्न सक्नु पर्छ । सम्भव भएसम्म पूरा गर्न सक्नु पर्छ । त्यही न हो मानवीय धर्म । छोरा छोरी हुनुको कर्तव्य । सेवा प्रदान, इच्छा पूरा र उपचारको सही तारतम्य मिलाउन सक्नु, बाबु आमालाई अभावमूलक मनसायमा गुज्रन नदिनु एउटा असल सन्तानको परमकर्तव्य हो ।
राज्यले पनि बूढाबूढीको मर्म र समस्यालाई बुझ्न जरुरी छ । बृद्ध भत्ता मात्र प्रयाप्त छैन । बूढाबूढी माथि हेला र दृव्र्यवहार हुनु भनेको सिङ्गो मानवीय जीवन वहिष्कृत हुन हो । असुरक्षित हुनु हो । यसर्थ राज्यले कि त उचित व्यवस्था गरोस् । गास, वास, कपास, स्वास्थ्य र सुरक्षाको । नत्र भने बाबु आमालाई दुव्यवहार गर्ने छोराछोरी माथि दण्ड सजाय हुने कानून बनाओस । त्यति गरे मात्र बृद्धा आमाबुबाको विजोग नहुन सक्छ ।
तर विडम्वना माथि उल्लेख भए जस्ता मान्छे गाउँ र शहरका समाजमा छयाप्छयाप्ती देख्न पाइन्छ । संवेदनाहीन छोरा छोरी वर्षे च्याउ समान छन् । बाबु आमा विरामी हँुदा उपचारमा कन्जुस्याई गर्ने, एक प्रकारको घाँडो अनुभव गर्ने, केही थप भार बहन गर्नु पर्दा ‘मरे पनि हुन्थियो ।’ भन्ने भावना बारम्बार उब्जाउने र बूढा आमा–बुबाप्रति तथानाम अभद्र व्यवहार गर्ने, उनीहरुको बुढेउली तन–मनलाई पीडा दिने छोराहरुले समाज अभिशप्त बनाएका छन् ।
हुन त यही समाजमा केही त्यस्ता आदर्शवान पात्र पनि छन् । जो नगण्य मात्रामा छन् । जसले बाबु–आमालाई सन्तुष्ट र खुशी तुल्याउन सक्नु आफ्नो जीवनको एउटा सफलता मान्छन् । कर्तव्यको एउटा पाटो ठान्छन् । र हरदम सेवारत् बन्दछन् । त्यस्तै पुण्यात्मा व्यक्तिहरुले अरुका बा–आमालाई, असहाय बृद्ध बृद्धहरुलाई आफ्नोपन दिएका छन् । वृद्ध आश्रम खोलेर आश्रय दिएका छन् । कतिले तिनै वृद्धाश्रममा आफु सक्दो दान गर्दछन् र सेवाबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि अजमाउँछन् । परमानन्दको सुख भोग गर्दछन् । तर तिनै वृद्ध आश्रममा बाबु–आमालाई फकाई फुल्याई छाड्ने, अर्थात बाबु–आमालाई बृद्ध आश्रममा छाडेर भाग्ने छोराछोरी पनि यो समाजमा देख्न पाइन्छ । अर्थात त्यस्ता अनपत्यारिला घटना सुन्न र पढ्न पाइन्छ । विरामी पर्दा उपाचार र सेवामा निष्क्रियता र निष्ठुरता देखाउने छोरा छोरीहरुको त यहाँ बहुमत नै छ ।
आखिरमा किन मान्छे यतिविध्न स्वार्थी र अमानवीय बन्दछन् ? किन मान्छेमा विरानोपन मौलाउँदै गएको छ ? किन मान्छेले मान्छेलाई भन्दा धनलाई महत्व दिन्छन् । भौतिक स्वार्थलाई भन्दा मानवीय संवेदनालाई कम महत्व दिन्छन् । लाग्छ, यो सब उचित संस्कार, शिक्षा र संस्कृतिको अभाव हो । जसको आधारमा आचरण र आदर्श बन्दछन् । जसका पूर्वाधारहरुले मान्छेलाई अपूर्ण मात्र होइन अपाङ्ग नै बनाइदिन्छ । अनि कता बाट आउँछ आनीबानीमा मानवता ? अनि कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् वृद्ध आमा–बाले सेवा ?
जव मान्छे मानवीय रुपमा आपाङ्ग बन्दछ । उसले पैसा बाहेक अरु थोक देख्दैन । संवेदना र भावनासँग सम्बन्धित पक्षहरु वाहियात ठान्छ । भौतिक सुख र सुविधा सिवाय । आजकलका अधिकार मान्छेलाई यही वास्तविकता, यही अनैतिकता र यही विडम्वनाको माखेसाङ्लोले घेराबन्दी बनाएको छ । आजका बूढाबूढीले सास्ती थेग्नु परेको छ । यतिसम्म कि तिनीहरुबाट विचरा वृद्ध आमा–बाबु माथि गरेको अन्याय, अत्याचार र अमानवीयताको त के कुरा गर्नु, उदारमना भएका व्यक्तिहरुले त्यस्ता विरामीलाई केही मिठो मसिनो लिएर भेट्न आए, खान दिए भने ‘खाने कुरा त ल्याएर दियौ, गुहँु सोर्न पनि आउनु होला’ सम्मको निकृष्ट बोली बोलेको पनि सुन्न पाइन्छ । बाँचे देख्न र सुन्न पाइन्छ ।
अत बुढेसकाल जीवनको बिट मार्ने क्षण हो । एउटा आदरणीय समय हो । यसर्थ हरेक वृद्धबृद्धाले सम्मानजनक सेवा पाउनु पर्छ । अन्यथा राज्यले पनि बूढाबूढीको मर्म र समस्यालाई बुझ्न जरुरी छ । बृद्ध भत्ता मात्र प्रयाप्त छैन । बूढाबूढी माथि हेला र दृव्र्यवहार हुनु भनेको सिङ्गो मानवीय जीवन वहिष्कृत हुन हो । असुरक्षित हुनु हो । यसर्थ राज्यले कि त उचित व्यवस्था गरोस् । गास, वास, कपास, स्वास्थ्य र सुरक्षाको । नत्र भने बाबु आमालाई दुव्यवहार गर्ने छोराछोरी माथि दण्ड सजाय हुने कानून बनाओस । त्यति गरे मात्र बृद्धा आमाबुबाको विजोग नहुन सक्छ । बुढेसकाल केही हदसम्म भए पनि सुखद हुने परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
गीता दर्शनशास्त्र हो भने भागवत् पौराणिक साहित्य हो
यज्ञप्रसाद बास्तोला, श्रावण २७, २०७७
कोरोना, कलह र सलह
दुर्गा अधिकारी, श्रावण २२, २०७७
रुद्र सन्देश मगर, श्रावण २१, २०७७
सन्दर्भ–गाईजात्रा: सक्कली र नक्कली एक विवेचना
शिवप्रसाद गौतम, श्रावण २१, २०७७
भाइरसबाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न १.४६ ट्रिलियन डलर लगानी गरिने: मोदी
श्रावण ३१, २०७७
रजत जयन्तीको अवसरमा ४६ युनिट रगत संकलन
थपिए ४६८ कोरोना सङ्क्रमित, ३ को मृत्यु
लकडाउनका कारण १६ व्यवसाय खारेज
च्याम्पियन्स लिगः बार्सिलोनाको पोष्टमा बायर्नको गोल वर्षा
बागलुङमा एउटै गाउँको छुट्टाछुट्टै पहिरोमा परी तीन जनाको मृत्यु
घाट ठेक्कामा सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’, ९ करोड गुम्ने खतरा
Prime Minister expressed best wishes on India’s 74th Independence Day
Rainfall predicted across country for3days
Three died in Baglung landslide
Oxygen bank to provide free of cost oxygen cylinder to Corona patients
468 new cases of COVID-19 registered today, death toll reached 102
11 people tested positive for COVID-19 in Pokhara, Gandaki State tally-1,700
One arrested for fleecing migrant workers
Landslide victims identified